Safarka Xumbo duulimaadka hadda qayb gaar ah Madaarka Auckland ee New Zealand
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Safarka Xumbo duulimaadka hadda qayb gaar ah Madaarka Auckland ee New Zealand
Airport • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
garoonka diyaaradaha ee auckland
Tani waa tii ugu horreysay adduunka. Terminalka caalamiga ah ee garoonka diyaaradaha ee Auckland ayaa loo kala saari doonaa laba aag taas oo qayb ka ah qorshe lagu ilaalinayo caafimaadka iyo badqabka dadka u duulaya ama ka imanaya wadamada ay New Zealand samaysatay xumbo safarka ah.
Anigoo rajaynaya waddo cimilo nabadgelyo leh oo laga dhex samaynayo New Zealand iyo Jasiiradaha Cook, Madaarka Auckland wuxuu isu diyaarinayaa inuu kala saaro qaybaha kala duwan ee socotada markay marayaan garoonka caalamiga ah.
Iyadoo la qorsheynayo heerarka ugu dambeeya, astaamaha ugu muhiimsan ayaa noqon doona kala soocida dhismaha garoonka caalamiga ah ee garoonka diyaaradaha labo aag oo iskeed u shaqeynaya, si ay u shaqeyso wax yar ka dib marka lagu dhawaaqo xumbada safarka:
Aagga Terminal-ka Caalamiga A, Aagga Safarka Nabdoon: Afaafka ugu weyn ee koonfurta (irdaha 1-10) waxaa isticmaali doona dadka u socdaalaya ama ka imanaya waddamada ay New Zealand la samaysay xumbo safar oo ammaan ah. Dadka ku sugan New Zealand in ka badan 14 maalmood oo ka duulaya duulimaadyo caalami ah waxay sidoo kale isticmaali doonaan Terminal A. Tafaariiqda iyo xulashooyinka cuntada iyo cabitaanka ayaa la heli doonaa
Aagga Terminal-ka Caalamiga ah B, Aagga Maareynta Caafimaadka: Aag labaad oo iskiis u kooban ayaa laga abuuri doonaa Pier B (irdaha 15-18), dhagaxa tilmaamaya galbeedka. Aagga Caalamiga ah ee B waxaa loo isticmaali doonaa dadka safarka ah ee ka imanaya waddamada aysan New Zealand lahayn xumbada safarka ee aaminka ah, oo looga baahan yahay in lagu sameeyo go'doomin la maareeyey ama karantiil. Waxaa sidoo kale loo isticmaali doonaa rakaabka sii maraya garoonka diyaaradaha ee Auckland iyagoo u socdaalaya meelo kale. Iyada oo ay kooban tahay tirada rakaabka raacaya, xulashooyinka cuntada iyo cabitaanka ayaa lagu heli doonaa iyada oo loo marayo mashiinnada iibinta
Laga soo bilaabo maalmihii ugu horreeyay ee safka faafa, Madaarka Auckland wuxuu si dhow ula shaqeynayay shirkadaha diyaaradaha iyo caafimaadka iyo hay'adaha xuduudaha si looga ilaaliyo New Zealand faafitaanka COVID-19.
“Markaan dib u habeynayno terminalkeena labo aag oo kala duwan waxaan abuureynaa hab amaan ah oo dadku ugu safri karaan kana soo noqon karaan wadamada aan sameysanay xumbada safarka, iyo waliba inaan awood u yeelano inaan si nabad galyo ah uga shaqeyno dadka reer New Zealand ee ka imanaya wadamada kale.
“Gegada diyaaradaha ee Auckland waa nidaam deegaan oo isku dhafan oo ururro ka kooban yihiin, waxaanan si dhow u wada shaqeyneynaa si aan awood ugu siino nabadgelyada iyo nabadgelyada safarka dadka safarka ah. Madaarka Auckland wuxuu dhisayaa gidaarrada cusub ee gudaha si uu u oggolaado in Terminalku kala baxo, waxaanan ka shaqeyneynaa heerarkii ugu dambeeyay ee qorsheynta hay'adaha xuduudda iyo diyaaradaha si aan awood ugu yeelano kala-baxa jirka iyo kan shaqada, ”ayuu yidhi Mr. Littlewood.
Asal ahaan waxaa la dhisay 2008 oo la kordhiyay sanadka 2018, International Pier B wuxuu ku shaqeeyaa shabakad madaxbanaan oo koronto oo ay ku jiraan kululaynta, hawo qaadashada, iyo qaboojiyaha, halka nidaamka sifeynta UV ay sii daaweyso una nadiifiso hawada. Xarun kale oo ka shaqeysa soohdinta ayaa sidoo kale laga abuuri doonaa aagga Terminal-ka Caalamiga B: Aagga Maareynta Caafimaadka.
Tan iyo markii uu qarxay COVID-19, garoonka diyaaradaha ee Auckland wuxuu kordhiyay talaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada iyadoo la waafajinayo shuruudaha Wasaaradda Caafimaadka, oo ay ka mid yihiin fayadhowrka joogtada ah ee meelaha taabashada badan, nadaafadda oo kordhay, hab maamuuska adag ee shaqaalaha, iyo saldhigyada gacmaha lagu nadiifiyo. dhamaan boosteejooyinka gudaha iyo kuwa caalamiga.
In kasta oo fogeynta jirku aysan ahayn wax shuruud ah marka loo eego Digniinta Heerka 1, waxaan ku dhiirrigelinaynaa macaamiisha inay u oggolaadaan meel u dhexeysa iyaga iyo dadka kale, qof walbana uu taxaddar dheeraad ah la yeesho nadaafadda.
"In kasta oo waqtiga dib loo aasaasayo safarka caalamiga ah ay tahay go'aan dawladeed, waxaan ka shaqeynaynay inaan hubinno inaan helno kaabayaal dhaqaale si aan u taageerno maareynta COVID-19 ee xadka iyada oo ay weheliso safar ammaan ah oo lagu tagayo waddammada aan bulshada loo gudbin." .Littlewood.
Markaad shaqeyneyso, rakaabka xumbada safarka ah ee safarka ah ee imaanaya kana tagaya waxa loogu yeeri doono International Terminal Zone A, waxay noqon doontaa khibrad la mid ah sida ay dadku ugu safreen Terminal kahor COVID-19. Bixitaanka caadiga ah iyo qaab dhismeedka amniga ayaa la diyaarin doonaa iyada oo ay ku xigi doonaan tafaariiqda iyo cuntada iyo aagga cabitaanka, iyada oo duulimaadyada ka tagaya International Pier A. Helitaanka International Pier B ay gebi ahaanba ka xirnaan doonaan dadka safraya.
"Waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaan si joogto ah u adeegsanno basaska iyo meelaha fog-fog si loo hubiyo kala-soocidda taxaddarka leh iyo ka shaqeynta rakaabka ka tagaya kana imanaya meelo kala duwan oo adduunka ah," ayuu yiri Mr Littlewood.
Samaynta isbadaladan howleed ee waa weyn waxaa kaliya oo suuragal ah iyadoo ay ka go'an tahay iyo taageerada dhamaan la-hawlgalayaasheena guud ahaan nidaamka garoonka diyaaradaha. Waxaan si adag uga shaqeynay sidii New Zealand looga ilaalin lahaa fayraska wadashaqeynta dhowna way sii socon doontaa iyadoo aan ka shaqeyneyno sidii aan awood ugu siin lahayn mustaqbalka goobooyin ammaan ah oo safarka ah. ”
Khariidad loogu talagalay kala-goynta boosteejada